Bike Race Free - Top Motorcycle Racing Games 7.7.22 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 7.7.22 လြန္ခဲ့ေသာ2လက
ဂိမ္းမ်ား အက္ရွင္ Bike Race Free - Top Motorcycle Racing Games
Bike Race Free - Top Motorcycle Racing Games ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
စက်ဘီးလူမျိုးကို Android ပေါ်အကောင်းဆုံးပြိုင်ကားဂိမ်းထဲကတစ်ခုပါ! ကစားသမားသန်းပေါင်းများစွာဆန့်ကျင်ပျော်စရာပြိုင်ပွဲနှင့်ရှိသည်။ ဆိုင်ကယ်ပြိုင်ထိပ်-rated အခမဲ့ဂိမ်းထဲကတစ်ခုပါ! ထိုအကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်! ဘီးအရှိန်မြှင့်ခြင်းနှင့်ပျော်စရာအဘို့အဆင်သင့်ရ!
- နယူးဂိမ်းမုဒ်: ပြိုင်ပွဲများ!
- multiplayer အပေါ်အသုံးပြုသူသန်းပေါင်းများစွာဆန့်ကျင်လူမျိုး
- သင့် facebook မိတ်ဆွေများကိုစိန်ခေါ်မယ်
- ဝိုင်ဖိုင်မပါဘဲ Play
အံ့သြဖွယ် features တွေ
-Cool position နဲ့ဆက်ဆံ
- အသစ်ကအကြောင်းအရာအများကြီးနှင့်အတူအခမဲ့ updates များကိုလက်လွတ်မနေပါနဲ့
သူတို့အားစကားမပြောနိုင်သောဆွဲကားတစ်စီးပြိုင်ကားဂိမ်းကိုမေ့လျော့။ မာစတာမော်တော်ဆိုင်ကယ်ဖြစ်လာစေရန်, ကျွမ်းကျင်မှု (အများကြီး) အရေး။ သူတို့ပြောသည့်အတိုင်းမနာကျင်မှုမရှိအမြတ်! ဒါကြောင့်တစ်ဦးလိုလားသူဆိုင်ကယ်ပြိုင်ကားသမားဖြစ်လာလျက်လူအပေါင်းတို့အုပ်ချုပ်ဖို့အခုလေ့ကျင့်ကိုစတင်ပါ။ ဒါဟာကျနော်တို့လက်ချောင်းများ၏အစွန်အဖျားမှာပျော်စရာအာမခံ, ဖြစ်လို့ဖြစ်လိမ့်မည်!
ပြိုင်ပွဲ Penguins: အဖြစ်လို့ဂိမ်း၏ဖန်တီးသူ - စက်ဘီးလူမျိုးထိပ်တန်းအခမဲ့ဂိမ်းများအားဖြင့်သင်တို့မှနှုတ်ဆောင်သည်။
အသုံးပြုသူကိုဖန်တီးအဆင့်ဆင့်နှင့် ပတ်သက်. ●အသေးစိတ်
သငျသညျတစ်နေ့လျှင်ထက်ပိုမို3featured အသုံးပြုသူဖန်တီးအဆင့်ဆင့်ဆော့ကစားချင်တယ်ဆိုရင်, သင်ကအဆင့်ကိုဗူးကိုဝယ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်သူတို့၏ codes တွေကိုရှိပါကသင်သို့မဟုတ်သင့်မိတ်ဆွေများကိုအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးန့်အသတ်အခမဲ့အဆင့်ဆင့်ဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းအခြားအသုံးပြုသူများ၏အင်တာနက်ပေါ်တွင်လူသိရှင်ကြား shared န့်အသတ်အခမဲ့အဆင့်ဆင့်ဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်။ အဆင့်ဆင့်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်ဖန်တီးမရနိုင်ပါ။ https://www.bikerace.com ဖို့အဆင့်ကိုဖန်တီးရန်လှိုင်း
စက်ဘီးပြိုင်ပွဲအခမဲ့ဆိုအင်တာနက်ချိတ်ဆက်မလိုအပ်ပါဘူး။ တစ်ဦး (အစစ်အမှန်) လေယာဉ်ပေါ်ပျံနေချိန်တွင်သင်ကဗိမာန်တော်၌န်ဆောင်မှုကာလအတွင်းလမ်းပေါ်ရှိကားထဲတွင်, မြေအောက်ရထားထဲမှာပျော်စရာပြိုင်ကားရှိသည်နိုင် (သို့မဟုတ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင်အိမ်သာပေါ်!)
ဤသည်အခမဲ့ဂိမ်း, သင်က်ဘ်ဆိုက်ကိုရယူရန်မယ့်အစားအသုံးပြုချင်ချင်ပါတယ်ကြောင်းကိုသင်၏မိုဘိုင်းအစီအစဉ်ကနေအချက်အလက်များ၏တန်ချိန်လောင် youtube ကဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အခမဲ့သီချင်းနားထောင်မည်မဟုတ်
အားလုံးကို Android ဖုန်းများနှင့် tablet ချောချောမွေ့မွေ့ဂိမ်းကို run နိုင်အောင်ကျနော်တို့စဉ်ဆက်မပြတ် (ခက်) အလုပ်လုပ်ကိုင်ပါတယ်။ သငျသညျ support+bikeraceandroid@topfreegames.com မှတွေ့ကြုံခံစားစေခြင်းငှါမဆိုပြဿနာသတင်းပို့ကျေးဇူးပြုပြီး
ဒါဟာအကြမ်းဖက်မှုမျှမကအခြားရင့်ကျက်သောအကြောင်းအရာများကိုဆံ့မထားဘူး။ ဒါကြောင့်ပဲရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူတဲ့ပြိုင်ကားဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူကကစားဖို့အခမဲ့ခံစားရနှင့်သင်ကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများဖြစ်လျှင်အဖြစ်ပျော်စရာရှိသည်။ ကျနော်တို့ကပျော်စရာပါလိမ့်မည်အလောင်းအစားသင်ကိုချစ်မယ်!
Bike Race Free - Top Motorcycle Racing Games အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Bike Race Free - Top Motorcycle Racing Games အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Bike Race Free - Top Motorcycle Racing Games အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
apps-me စတိုး 53.79k 16.45M
Bike Race Free - Top Motorcycle Racing Games ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Bike Race Free - Top Motorcycle Racing Games အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 7.7.22
ထုတ်လုပ်သူ Top Free Games.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.topfreegames.com/games/bikerace/legal/privacy
လက်မှတ် SHA1: 50:42:59:90:ED:D3:BB:42:BD:A1:8C:4F:F5:9F:6B:C3:FC:83:E9:9C
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Top
Bike Race Free - Top Motorcycle Racing Games APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ